Kitty For Me: September 2007
My phone's themes...
I created at http://www.ownskin.com/.
Enjoy !! :p
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက ရတဲ့ မေးလေးပါ။ ဖတ်ကြည့်ပြီး သဘောကျလို့ ပြန်ပြီး ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ စိတ်ညစ်နေတဲ့ အချိန်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်မပျော်ရွှင်တဲ့ အချိန်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲလို ဟာသလေးတွေဖတ်လိုက်ရရင် နဲနဲတော့ စိတ်လက်ပေါ့ပါးသွားတတ်ကြတာပါပဲ။
Posted by Me at 2:03 AM2comments:
အလုပ်သစ်အတွက် interview ရှိလို့ နေနေ ပေးထားတဲ့ Java J2EE Job Interview Companion Pdf ကို အသေအကြေဖတ်နေမိတယ်။ နီးမှ ကပ်လုပ်တာ ထုံးစံလိုကိုဖြစ်နေတယ်။ ဘာမှ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ကို မရှိဘူး။
ဖတ်နေရင်းနဲ့ Java အခြေခံအကြောင်း အပြီးနားမှာ Tips လေးတွေရေးထားတာကို တွေ့ရတယ်။ တော်တော်ကောင်းတဲ့ Tips လေးတွေ။ အဲဒီက လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါရစေ။
(1) Try to find out the needs of the project in which you will be working and the needs of the people within the project.
(2) 80% of interview questions are based on your resume.
(3) Be honest to answer technical questions, you are not expected to remember everything (for example you might knowafew design patterns but not all of them etc).
(4) Do not be critical, focus on what you can do. Also try to be humorous to show your smartness.
(5) Do not act superior. (အကြိုက်ဆုံး အချက်)
Posted by Me at 2:16 AM3comments:
မအားတာရော...အပျင်းကြီးနေတာရော...အဲဒီ ၂ ခုပေါင်းပြီး ဘလော့ကို ပစ်ထားမိတယ်။ ရေးချင်စိတ် သိပ်မရှိတာလဲ ပါတယ်။ သူများတွေလိုလဲ စာကောင်းကောင်းမရေးတတ်တော့ သီချင်းလေးတွေ မင်းသားမင်းသမီးအကြောင်းလေးတွေ အရုပ်ကလေးတွေ တင်ပေးရုံကလွဲပြီး ဘာမှရေရေရာရာ မရေးတတ်ဘူး။ ဟီးဟီး။
ဒီနေ့ နေ့လယ်ထမင်းစားပြီး ကိုယ့်ဘလော့ကို ခဏ၀င်ကြည့်မှပဲ July Dream က tag ထားမှန်းသိတော့တယ်။ The Most Favorite Posts တဲ့လား။ ကိုယ့်ပိုစ့်တွေကို ကိုယ်ပြန်ကြည့်ဦးမှပဲ။ ဘယ်ဟာမှတော့ သေသေချာချာ မကြိုက်လှပါဘူး။ ကောင်းကောင်းကန်းကန်းရေးထားတာ သိပ်မှမရှိပဲ။ :P
မောင်စိန်ဝင်း ရေးထားတဲ့ အချစ်ဦးဆိုတဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ဘာကြောင့်ကြိုက်သလဲ မမေးပါနဲ့...မဖြေနိုင်ပါဘူး။ :P
်Flash နဲ့ရေးထားတဲ့ ငှက်တစ်ကောင် သီချင်းဆိုနေတဲ့ ဖိုင်လေးပါ။ နားထောင်တိုင်း ပြုံးမိပြီး ကြည့်လိုက်တိုင်း သူ့အမူအရာလေးက ရီချင်စရာကောင်းတဲ့ ငှက်ကလေးပါ။ အသံကျယ်ကျယ်ဖွင့်လေ ပိုရီရလေနော... စမ်းကြည့်ပါ။
(3)Let's Do Exercise
(4)Paran - Forever Loving You
Paran အဖွဲ့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးသီချင်းလေးပါ။ ကိုရီးယားpop bang တွေအင်္ဂလိပ်လိုဆိုကြတဲ့ သီချင်းတွေထဲမှာ ဒီသီချင်းလေးကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ နားထောင်ကြည့်ပါဦး။
(5)FT Island - I'm happy
FT Island အဖွဲ့ရဲ့ I'm happy ဆိုတဲ့ ဘလော့နောက်ခံအဖြစ်ထားထားတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ အသက်လေးတွေ ငယ်ပေမယ့် အောင်မြင်မှုတွေကို စပြီးရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ korea pop/rock အဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့ပါ။ သီချင်းလေးက ချစ်စရာလဲကောင်း...စစချင်းမှာ ဘာဂျာသံလေးနဲ့ နားဝင်လဲချိုပါတယ်။ နားထောင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ကဲ...ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံးလေးတွေ ရွေးပြီးသွားပြီနော်။ လာလယ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အကြိုက်နဲ့ရော တူရဲ့လား ကြည့်လိုက်ပါဦး....
Posted by Me at 11:11 PM6comments: